Alahadin’ny MAMRE eto @ FJKM Ambavahadimitafo – FJKM Ambavahadimitafo Alahadin’ny MAMRE eto @ FJKM Ambavahadimitafo |
Alahadin’ny MAMRE eto @ FJKM Ambavahadimitafo
Publié le 11 octobre 2020 à 09:10
Amin’ny alahady 18 oktobra 2020 dia alahadin’ny MAMRE manerana ny sahan’ny FJKM. Ka nofidian’ny Foibe FJKM hanaovana izany fotoan-dehibe izany ny FJKM Ambavahadimitafo. Miavaka noho ny mahazatra anefa ny fankazalana izany satria hampitaina amin’ny televiziona sy radio fahazavana ny fotoana.
Mba ahafahana manatanteraka izany dia ho raisin-peo sy sary (tournage) mialoha ny fotoana, amin’ny talata 13 Oktobra 2020 amin’ny 9 ora – 11 ora maraina ka hanasàna antsika kristiana tsy ankanavaka.
Ny fotoam-pivavahana manontolo dia hotarihin’ny Foibe FJKM avokoa, ankoatran’ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora izay hotanterahin’ny mpitandrina Randrianarisoa Alain.